सेलिब्रिटी लुक्स र युवतीको सौन्दर्य – Celebrity Khabar
सेलिब्रिटी खबर १४ भाद्र २०७७, आईतवार २३:५२
जवाफ हुनसक्छ, पक्कै छैन । त्यसो भए एक युवतीले कुनै सेलिब्रिटीलाई आफुसँग तुलना गरेर दुःखी वा उदास हुन जरुरी छ रु बलिउड अभिनेत्री सोनम कपूरले यही विषयमा घतलाग्दो कुरा भनेकी छिन् ।
सेलिब्रिटी लुक्स कसरी मिल्छ ?
हरेक युवती ऐनाको अगाडि उभिएर स्वंयमलाई हेर्दै यो सोच्छन् कि, म सेलिब्रिटी जस्तो किन देखिन्न ? म ती सबै युवतीलाई बताउन चाहन्छु कि, कुनैपनि सेलिब्रिटी बिहान उठ्नसाथ यस्तो देखिदैनन्, जस्तो तपाईहरु सोच्नुहुन्छ । सत्य त यो हो कि, सार्वजनिक स्थानमा आउनुअघि मलाई ९० मिनेट मेकअप चियरमा विताउनुपर्छ । कसैले मेरो केस बनाउँछन्, कसैले मेरो मेकअप । कतिले मेरो नङ बनाइदिन्छन् । हरेक हप्ता मेरो आइब्रोको सेप दिइन्छ ।
मैले यसअघि पनि भनिसकेको छु कि, सेलिब्रिटीको लुकको पछाडि धेरै टिम, धेरै पैसा र धेरै समय खर्चिएको हुन्छ । यी सबैको एकमुष्ठ मिहेनतपछि सेलिब्रिटी लुक आउँछ । जो तपाई देख्नुहुन्छ, त्यो सत्य होइन । यदि अर्को पटक कुनै १३ बर्षिय किशोरीले म्यागजिनको कभरमा सेलिब्रिटीलाई घुरेर हेरिरहेको छ भने उनलाई तपाई यो मिथ तोड्न नभुल्नुहोस् । तपाई बताइदिनुहोस् कि, तिमी स्वंम एकदम राम्री छौं । उनको दिमाग र स्माइलको तारिफ गर्नुहोस् । उनको दिमागमा यो आउन नदिनुहोस् कि, उनमा कुनै कमी छ ।
२ कार्तिक २०७७, आईतवार २३:०७